Canton Fair 2020 နွေ ဦး ရာသီအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ခေါင်းယူခြင်း
Seach Trade Fair
Online Canton Fair တွင်ပါ ၀ င်ရန် ဟိ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဝယ်သူလမ်းညွှန် သင်ကူညီနိုင်ပါတယ်။
သတိပြုရန်၊ အောက်ပါအချက်အလက်များသည်ပုံမှန် Canton Fair အတွက်သာမဟုတ်ဘဲ Canton Fair ၁၃၀ အတွက်ဖြစ်သည်။
၀ ယ်သူတံဆိပ်ကိုရယူရန်တစ်ခုတည်းသောနေရာမှာလူကိုယ်တိုင် Canton Fair Registration Offices (အောက်တွင်) ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းကိုအားပေးဖို့ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်း လူတိုင်း၏အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်အတွက်ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို Express Channel မှရယူနိုင်သည် မှတ်ပုံတင်ရုံး.
+ - မှတ်ပုံတင်ခြင်းရုံးများ ပြိုကျဖို့ကိုနှိပ်ပါ
သငျသညျကိုအောကျတှငျဤအ3ဝယ်သူမှတ်ပုံတင်ခြင်းရုံးများရတဲ့အခါသင်မှတ်ပုံတင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
1. ဟိုတယ်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ မှတ်ပုံတင်ရုံးများဖွင့်လှစ်ထားသည်
2 ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းရုံးများတရုတ်သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်တရားမျှတသော Complex မှာ set up
အရှေ့ဘက်ခြမ်းBရိယာ B ၏လမ်း
ခန်းမ 16.1 Areaရိယာကို C
3 ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းရုံးများ Canton တရားမျှတသောဟောင်ကောင်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးဖွင့်မသတ်မှတ်
နေရပ်လိပ်စာ: ROOM တွင် 3106 - 3107, Office ကိုတာဝါ, ကွန်ဗင်းရှင်းပလာဇာ, No.1 ဆိပ်ကမ်းလမ်း, Wanchai, ဟောင်ကောင်
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု Hotline: (852) 2877 1318
ဖက်စ်: (852) 2838 3169
ဖွင့်ချိန်များ - တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့နံနက် ၁၀ နာရီမှ ၁၂း၃၀ နာရီနှင့်ညနေ ၂ နာရီမှ ၅ နာရီအထိ; စနေနေ့၊ တနင်္ဂနွေနှင့်ဟောင်ကောင်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များတွင်ပိတ်သည်
+ - မှတ်ပုံတင်ခြင်းရုံးများမှာအွန်လိုင်း Pre-လျှောက်လွှာဝယ်သူများအဘို့ Express ကို Channel ကိုတံဆိပ်-လာပြီ ပြိုကျဖို့ကိုနှိပ်ပါ
(တစ်ဦးအထက်တွင်-one-တစ်နှစ်ခြားမြေခြားအလုပ်ဗီဇာနှင့်အတူပြည်ပနိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ဟောင်ကောင် / မကာအိုမူလစာမျက်နှာ-ပြန်လာခွင့်, ထိုင်ဝမ် Compatriot ခရီးသွားလက်မှတ်, ပြည်ပတရုတ်, Min Nan Chinese သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အဖြစ်သက်တမ်းရှိ Id) မိမိကိုယ်ကိုစာရွက်စာတမ်းများ;
အဆိုပါတံဆိပ်ထိရောက်စွာကြောင့်ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ယူပြီးမေ့လျော့ဖို့မျိုးစုံအစည်းအဝေးများ, Re-လျှောက်လွှာအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကြင်နာစွာကဘေးကင်းလုံခြုံစောင့်ရှောက် 200RMB တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။
+ - စားပွဲတင်တောင်းဆိုထားသောမှတ်ပုံတင်ခြင်းစာရွက်စာတမ်းများ ပြိုကျဖို့ကိုနှိပ်ပါ
စက္ကူဖိတ်ကြားလွှာ / E-ဖိတ်ကြားလွှာရှင်
တစ်ဦး။ စက္ကူဖိတ်ကြားလွှာကတ်သို့မဟုတ် Canton တရားမျှတသောထုတ်ပေးပါ E-ဖိတ်ကြားလွှာ
ခ။ ကိုယ်ပိုင်စာရွက်စာတမ်းများ (အသေးစိတ်ကို ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်စုများတွင်ကြည့်ပါ)
က c ။ 5cm X ကို 4cm ၏အရွယ်အစားနှင့်အတူမကြာသေးမီကဓာတ်ပုံကို
တရုတ်သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်တရားမျှတသော Complex သို့မဟုတ်ချိန်းချက်သောဟိုတယ်များအတွက်
တစ်ဦး။ Card များကိုရယူဘို့သတိပြုပါ
က c ။ အမည်ကဒ်
မှတ်ပုံတင်ခြင်းတရုတ်သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်တရားမျှတသောအတွက်ရုံး Complex သို့မဟုတ်ချိန်းချက်သောဟိုတယ်များအတွက်
Canton တရားမျှတသောဖို့ခဲ့ကြသူ non-ဖိတ်ကြားလွှာဝယ်သူများ
အတိတ် Canton မျှတသောအဘို့ဝယ်ကဒ်
က။ ကိုယ်ပိုင်စာရွက်စာတမ်းများ (အသေးစိတ်များ၊ ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်စုများကိုကြည့်ပါ) ။
ခ။ 5cm X ကို 4cm ၏အရွယ်အစားနှင့်အတူမကြာသေးမီကဓာတ်ပုံကို
ခ။ ၀ န်ထမ်း၏ ID ကဒ်ပြားနှင့်မိတ္တူ
က c ။ တစ်ဦးကလတ်တလောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဓာတ်ပုံကို
(ပြည်ပကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီအတွက်ပြည်တွင်းကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး သာခွင့်ပြုထားသဖြင့်ဆွေမျိုးပြည်ပကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ၀ ယ်သူများကအဖော်ပြုပြီးလက်မှတ်အတည်ပြုပေးရမည်)
တရုတ်သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်တရားမျှတသော Complex အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းရုံး
+ - Doucuments မှတ်စုများ ပြိုကျဖို့ကိုနှိပ်ပါ
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာရွက်စာတမ်းမရ။ ပြည်ပနိုင်ငံကူးလက်မှတ် (တရုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မဟုတ်ပါ)၊ ဟောင်ကောင်/ မကာအိုအိမ်ပြန်ခွင့်ပါမစ် (သို့) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်၊ ထိုင်ဝမ် Compatriot ခရီးသွားလက်မှတ်၊ ပြည်ပတရုတ်များအတွက်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများ (သို့) တစ်နှစ်ကျော်သက်တမ်းရှိပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဗီဇာနှင့်သက်တမ်းရှိတရုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တို့ပါ ၀ င်သည်။
ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံ 5cm X 4cm (ပွဲတက်လျှင်သင်ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်သည်။ )
+ - မှတ်ပုံတင်ခြင်းအချိန် ပြိုကျဖို့ကိုနှိပ်ပါ
တရုတ်သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်တရားမျှတသော Complex အတွက်ပြည်ပဝယ် '' မှတ်ပုံတင်ရုံး:
phase II ကို
အဆင့် III ကို
မေလ 1-4, 8: 30-18: 00, မေလ 5, 8: 30-14: 00 နွေဦးအတွက်
ဆောင်းဦးရာသီမှာတော့: အောက်တိုဘာ 31-Nov.3, 8: 30-18: 00, နိုဝင်ဘာ 4, 8: 30-14: 00
ခန့်အပ်ထားသောဟိုတယ်များအတွက်ပြည်ပဝယ် '' မှတ်ပုံတင်ရုံး:
နွေဦးရာသီများတွင်: Apr. 30-မေလ 1, 8: 30-18: 00; မေလ 2, 8: 30-14: 00
ဆောင်းဦးရာသီမှာတော့: အောက်တိုဘာ 30-31, 8: 30-18: 00; Nov.1, 8: 30-14: 00
+ - မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဇယား ပြိုကျဖို့ကိုနှိပ်ပါ
+ - အဆိုပါ Entry 'တံဆိပ်ကိုများအတွက်သိကောင်းစရာများ ပြိုကျဖို့ကိုနှိပ်ပါ
အကယ်၍ သင်သည် ၀ ယ်သူ၏ဝယ်သူ၏ကဒ်ရရှိထားပါကအောက်ပါအချက်အလက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ အသိပေးပါ။ Entry Badge (IC Card) သည်လာမည့် Fair ၏အစည်းအဝေးများအတွက်တရားဝင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏အချိန်ကိုအလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကဒ်ပြားကိုသယ်ဆောင်ရန်မေ့သွားပါကသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးလျှင်ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းသည် ၀ န်ဆောင်ခအဖြစ် 200RMB / ကဒ်ပြားကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။
Buyer Card သည်ဤပြပွဲသို့တရားဝင် ၀ င်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး China Import and Export Fair Complex တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ သင်၏အချိန်ကိုသက်သာစေရန်နှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုပိုမိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက်ယခုအခါနိုင်ငံခြားသား ၀ ယ်သူများ၏မှတ်ပုံတင်ရုံး (၃၁) ကိုခန့်အပ်ထားသောဟိုတယ်များတွင်ထားရှိသည်။ ထို့အပြင်မနက် ၉:၃၀ နာရီမွန်းတည့်အချိန်ဖြစ်သော China Import and Export Fair Complex ၌ဤဟိုတယ် ၃၁ ခုတွင် Canton Fair ဝင်ခွင့်တံဆိပ်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်လည်းအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤဒေသများအနီးတွင်နေထိုင်သော ၀ ယ်သူများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဟိုတယ်များတွင်လည်းမှတ်ပုံတင်ပါ။
ဝယ်သူကတ် (တံဆိပ်) သည် Canton Fair သို့တရားဝင်တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာတရားမျှတသော၏မျိုးစုံအစည်းအဝေးများနှစ်ပေါင်းတရားဝင်သည်။
Canton တရားမျှတသော fo ရက်စွဲများ
အတိတ် 16 နှစ်တွင်စီးပွားရေးသမားထောင်ပေါင်းများစွာ၏တာဝန်ထမ်းဆောင်
အမေးအဖြေများ / အကူအညီ
© 2005 - 2021 CantonShare စီးပွားရေးဝန်ဆောင်မှု (CBS အဖွဲ့) Tel: +852 8170 0688